मध्यराति अचानक ! निन्द्राबाट ब्यूँझिएकी महिलाको शरीरमा केहि टाँसियो, अनि निकाल्न थाल्यो विचित्रको आवाज ! – Sanchar Patrika
मध्यराति अचानक ! निन्द्राबाट ब्यूँझिएकी महिलाको शरीरमा केहि टाँसियो, अनि निकाल्न थाल्यो विचित्रको आवाज !
एजेन्सी। बिहारको मंगेर जिल्लाकी एक महिलाको ज्यान त्यतिबेला संकटमा पर्यो जतिबेला मध्यरातमा अचानक उनलाई एक नागले बेर्यो। विचित्रको आवाज सुनेपछि निन्द्राबाट ब्यूँझिएकी महिला आफ्नो शरीरलाई नागले बेरेको देखेपछि उनको होश उढ्यो। र डरका कारण उनको आवाज पनि निस्किएन।
बिहारको मंगेर जिल्लाको इटहरी पंचायतको कल्याणटोला गाउँमा मनोज मण्डललकी पत्नी पुतुल देवीको शरीरलाई करिब डेढ घण्टासम्म नागले बेरेर राखेको थियो। राति सुतेको बेला एक सर्पले उनको बायाँ खुट्टालाई बेरेको थियो। जब आफूलाई अप्ठेरो महशुस भएपछि उनको निन्द्रा खुल्यो र हेर्दा उनको होश नै उड्यो। त्यसपछि उनको परिवार र छिमेकी त्यहाँ पुगेर भगवानको नाम जप्न थाले। त्यसपछि सो सर्प आफैं त्यहाँबाट गयो।
महिलाका छोराले सबैलाई आमाको खुट्टालाई सर्पले बेरेको सुनाए। त्यसपछि सबै छिमेकीलाई पनि यो विषयमा बताइयो। केही समयपछि गाउँले भेला भएर भगवानको नाम जप्न थाले। त्यसको डेढ घण्टापछि सापले महिलाको खुट्टालाई छोडेर आफैं त्यहाँबाट गयो ।
Prevप्रधानमन्त्री भन्छन् स्थिति भ’यावह छ, प्रवक्ता भन्छन्- गाडी चलाऊ, यातायात म’जदुर भन्छन्- भो’कले म’र्नेबेला भो !
Next२ करोड मानिसले हेरेको नेपाली किशोरको म्युजीक भिडियो (भिडियोसहित)
चीनमाथि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कारवाही गर्ने अमेरिकाको तयारी